Thwebula Zune 4.8.2345 – Vessoft
Abadlali Media, Hambayo
Zune – a software ukuvumelanisa idatha phakathi kwekhompyutha yakho kanye nedivayisi isekelwe Windows uhlelo Ucingo yokusebenza. Zune iyona semidya esenza ukudlala amafayela alalelwayo video of ngetakhiwo letehlukene, buka izithombe futhi urekhode akwazi ukugcina. Isofthiwe ikuvumela ukuba wengeze amafayela alalelwayo video ohlwini lwadlalwayo, ukuphatha images ukuqoqwa noma podcasts wezincwadi multimedia. Zune iqukethe esakhelwe esitolo online ukulanda imidlalo kanye zokusebenza ahlukaniswe izigaba ezahlukene. Futhi, usebenzisa Zune kungenzeka ukuba ubuyekeze uhlelo lokusebenza a smartphone.
Ukuvumelanisa smartphone esekelwe eliphezulu Windows
Usekela media takhiwo ehlukahlukene
Ikhono ubuyekeze uhlelo lokusebenza of smartphone
Amazwana on Zune:
Zune Ahlobene software:
English, 中文, Português, Italiano... Sharepod 4.2
Hambayo Imeneja for omakhalekhukhwini wenkampani Nokia. Isofthiwe ikuvumela ukuba uphathe amafayela, oxhumana nabo, imiyalezo futhi uvumelanise idatha nge computer yakho.
English, Français, Español, Deutsch... Facebook Video Downloader 3.17.17
Hambayo Isofthiwe ukuze uthumele amafayela emidiya phakathi kwekhompyutha yakho ne-iOS. Isofthiwe ine isethi amathuluzi ukuphatha umculo namavidyo amafayela.
English, Français, Español, Deutsch... KakaoTalk 2.5.1.1415
Downloaders Isofthiwe ukulanda HD video kusukela kumasevisi web popular. Isofthiwe iqukethe esakhelwe search engine kanye isiphequluli ukuthola okuqukethwe by angukhiye.
Isithombe Onamandla ihluzo umhleli bese uhlela izithombe. Isofthiwe ikuvumela ukulanda imiphumela eyengeziwe futhi amathuluzi ukusebenza ngemifanekiso.